Roobab wanaagsan oo laga soo sheegay qaybo kamid ah gobolada Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandRoobab wanaagsan oo laga soo sheegay qaybo kamid ah gobolada Puntland
Biyo qulqulaya togga Garoowe roobka kadib, May 12, 2019. [Sawirka: Xuseen Xaaji/Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Roobab wanaagsan ayaa laga soo sheegayaa qaybo kamid ah gobolada Puntland.
Gobolada helay roobka Gu’ga waxaa kamid ah Bari, Karkaar, Sanaag, Nugaal, Mudug iyo Sool, sida dadka deegaanka ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Roobkan ayaa yimid xilli ay abaar daran ka jirtay deegaanada Puntland kadib markii uu daahay roobka Gu’ga oo curan jiray bisha April.
Garoowe-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 200 oo askari iyo taliyeyaashooda ayaa ka goostay ciidanka Somaliland ee gobolka Sanaag, sida ilo-wareedyo madax-banaan ay u xaqiijiyeen bog wareedka Puntland Mirror. Ciidamadan goostay ayaa maamulka Somaliland u qaabilsanaa deegaano [...]